Club-inkampani - Wikipedia
Club-ngoku i club imidlalo ukuba endaweni yokuba uyayenza ngokusemthethweni umbutho civil inzuzo, ngayo, kunokuba a ishishini wadala ngenjongo inzuzo kusuka kwezemidlalo. Ngoku Clubs zixhaphakile kwezemidlalo American kunye kumazwe aliqela aseYurophu, kodwa nangoku kunqabile eMzantsi American ekhatywayo.
Ngokwembali, amaqela ezemidlalo ehlabathini wakha zilungiswe abangenzi, ukususela kwiinkqubo zemidlalo yayilawulwa engahlawulwayo, kungekho ukuze inzuzo.
Amanye amazwe, ke, basaba lo mthetho. ENgilani, ukususela ekuqaleni 20 iiklabhu besele ngumbutho iinkampani limited. E Italy, ngowe-1919, iqela zabelo wadala Unione Sportiva Salernitana, ngukhokho Salernitana yangoku US 1919, ukususela ngoko iqela-kwinkampani.
EUnited States, inkqubo wemikhwa amaqela ezemidlalo izenzo zasekuhlaleni ngohlobo franchise, apho club nganye yinkampani onelungelo ipesenti amanyathelo league, oko kukuthi, nayo, inkampani enkulu, nto leyo lilawula ukhuphiswano phakathi kwabo yamalungu. Ngenxa yoko, kunokuthiwa iiklabhu ishishini kweli lizwe zezona ulawulo, ubuncinane kwimidlalo eliphezulu, nangona kukho iiklabhu non-ngeniso, ezifana i New York Athletic Club.
Ngo-Brazil, i-yokuqala club-inkampani União São João, wadala njenge umbutho ongenzi nzuzo, kodwa linokuguqulwa 1994, kusekho phantsi ixesha uMthetho Zico,, Okwaye kwabonelela iiklabhu yebhola ekhatywayo ibe ziinkampani. Nokufika Pele mthetho, nto leyo ukubuyisa uMthetho Zico, nto leyo ekholejini, waba kuyimfuneko, kwaye zonke iiklabhu webhola ohlawulwayo e Brazil kufuneka ukuba babe iinkampani. Xesha esandiswa kamva ukuba komnye unyaka, de ekugqibeleni, ngowe-2000, uMthetho No. 9981 liye isibophelelo, kwakhona ukhetho iiklabhu. Umcebisi Alexandre Bueno Cateb kunjalo, yenza ukugxeka elinzima komthetho, ekubeni ngethiyori, utshintshelo ukuba amalungu eklabhu ukuba ubutyala ngokudibeneyo eziliqela, nangona practice, eli lungiselelo zange isetyenziswe.
Retrieved from "https://xh.wikipedia.org/w/index.php?title=Club-inkampani&oldid=29580"
Last edited on 16 EyeSilimela 2018, at 21:48
This page was last edited on 16 EyeSilimela 2018, at 21:48.